ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကလူသစ် ဖတ်ဘို့စာ...”
I think this post is not only for Lu Thit but also for Pandora, TZA and many other Burmese like them. Very good post indeed, Ko Paw. :D
ကိုပေါရဲ့ ပို့စ်ကို ဖတ်ရင်း လူသစ်ရဲ့ မူရင်းပို့စ်ကိုပါ ဖတ်မိသွားတယ်။
ကိုပေါရဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် ရွှေမြန်မာများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခံယူချက်နဲ့ သဘောထားကို လေးစားမိခြင်းနှင့်အတူ လေးနက်စွာ ထောက်ခံပါတယ်။
ရယူလိုတဲ့ အရာဝတ္ထု တန်ဖိုးကြီးမားလေလေ ပေးဆပ်ရတာ ပိုများလေလေပါပဲ။ ဘာမှ မပေးဆပ်နိုင်ရင် ဘာမှ မရပါဘူး။
လူသစ်အပါအ၀င် တခြားသော မျိုးချစ်မြန်မာတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် ဆွေးနွေး အကြံပြုသူတွေကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ကောင်းမွန်သော ရေတို၊ ရေရှည် အကြံကောင်းများနဲ့ မိမိတိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စွန့်လွှတ်စွန့်စား ပါဝင် လှုပ်ရှားလာမယ့်အချိန်ကို စောင့်ကြိုနေပါတယ်။
မတရားသော စစ်အာဏာရှင် မှန်သမျှ ကျဆုံးရမည်။
တခါမှ ဒီလိုမျိုး ကျနော် ၀င်မပါခဲ့ဖူးဘူး။ ခုတော့ ၀င်ပါသင့်တယ်ထင်လို့ ၀င်ပါတာပါ။ သို့သော်လည်း လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားပြီး ၀င်ပါတာပါ။
ကျနော်က ကိုယ့်ကို အများမြင်အောင် တိုင်ဖက်တက်နေတာ မဟုတ်ဖူးဆိုတာတော့ အရင် ပြောချင်ပါတယ်။
ကိုပေါကိုလည်း လေးစားတယ်၊ ကလူသစ်ကိုလည်း လေးစားတယ်။ လူချင်း မသိဘူး။ လူကိုယ်တိုင်လည်း မဆူံဖူးဘူး။ ဒါပေသည့် စာတွေကို ဖတ်ရတော့ လူတွေကိ်ု မြင်နေရပါတယ်။ နှလုံးသားတွေကို မြင်ရတယ်။ စေတနာတွေကို မြင်ရတယ်။ နိုင်ငံအပေါ် ချစ်တဲ့ ကိုယ့် ပြည်သူလူထုအပေါ်ချစ်တဲ့ အချစ်တွေကို မြင်နေရ ခံစားနေရတယ်။
တခါတခါ ကျနော့်အတွက်တော့ နှလုံးသားတူသူတွေ စေတနာတူသူတွေ ဘာကြောင့် ကွဲလွဲနေတာလည်း ကျနော် နားမလည်ဘူး။ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာ မဟုတ်ဘူး။
ကျနော့် တမျိုးလုံးက သူပုန်တွေချည်း(အစိုးရအပြော) တကယ်ကတော့ တော်လှန်ရေးသမားတွေပါ။ ဂုဏ်ဖော်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် ပြောနေတာကို နားလည်စေချင်လို့ပါ။
လေးလေးနက်နက် ပြောရရင် အဆုံးအဖြတ် ကျတဲ့ တိုက်ပွဲတွေမှာ အင်အားကို သုံးရမှာပါ။ ရှိနိုင်သမျှသော ရနိင်သမျှသော အင်အားတွေကို သုံးပြီး တိုက်ရမှာပါ။
အဆုံး အဖြတ် မကျတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကို တိုက်ရင်တော့ ကိုယ့်အင်အားတွေကို ချွေတာရမှာ ပါပဲ။ အလဟသ ဆုံးရှုံးလို့ မဖြစ်ဘူး။
ကျနော် နားလည် မိသမျှကတော့ ကလူသစ် ပြောနေတာက ကျနော် အထက်က ပြောသလို အဆုံး အဖြတ် မကျတဲ့ တိုက်ပွဲတွေအတွက် စေတနာနဲ့ ပြောနေတာလို့ ယူဆပါတယ်။
ကျနော့် ဘလော့မှာ ကျနော့် အီးမေးလ်ကို ကိုပေါတွေ့မှာ ပါ ကျနော် ပြောတာကို မကျေလည်ခဲ့ရင် အီးမေးလ်ထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ် ဂျီတော့ခ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် ပြောကြတာပေါ့။
ဒီမှာ ကျနော့် အီးမေးလ် augustine1703@gmail.com
အခုလိုရေးလိုက်တာ ကောင်းတယ် ကိုပေါရေ…..
ကလူသစ် ဘလော့ဂ်ကိုလည်း သွားဖတ်ပြီးပြီ။ ကလူသစ်အနေနဲ့ သူအနိုင်ပြောနိုင်ဘို့ သမိုင်းကို တလွဲကောက်ချက်ချတယ်လို့ ကျမ ခံစားရတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အင်္ဂလိပ်အစိုးရက အမိန့်မထုတ်ခင်အထိ ကလူသစ်တို့လို ဘာမှ မလှုပ်ရှားဘဲ ထိုင်နေခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးမှာ တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားခဲ့လို့သာ အင်္ဂလိပ်က ဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာပါ။ အမွိုင်ကို ရောက်တော့လည်း နိုင်ငံခြားအချိတ်အဆက် မရလို့ အကြာကြီး သောင်တင်နေခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ တကယ်ဆိုရင် အခု ကိုစိုးသီဟတို့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ တထပ်တည်းကျပါတယ်။
ကျမအမြင်တော့ ကလူသစ်တို့ဟာ သူတို့ပါဝင်သင့်တဲ့ အရေးတခုမှာ မပါဝင်ခဲ့ဘဲ အရေးကြုံတဲ့ကျတော့မှ မြေနိမ့်ရာလှံစိုက် လုပ်နေကြသလို ကျမ ခံစားရတယ်။ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်မလုံလဲတာကို ကုစားဘို့အတွက် သူရဲဘောကြောင်မှုကို အတင်းဆွဲကာနေတယ်လို့ဘဲ မြင်ပါတယ်။
စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ကိုပေါရေ…. ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ အဲလို လူမျိုးတွေ များနေသေးလို့ ဒီမိုကရေစီမရနိုင်သေးတာပါ။ ဒီအခက်အခဲတွေကို အချိန်ယူ ကျော်လွှားရဦးမှာပါ။
ကိုပေါရေ နောက်ထပ် ထွက်လာမည့်သူတွေ အတွက် တွန့်သွားတာတော့ ငြင်းမရတဲ့ အမှန်တရားပါ.. ဒါ ကို ရလဒ် တစ်ခူ outcome တစ်ခု အဖြစ် ထညိ့သွင် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်..
positive outcome နဲ့ negative outcome ဏ္ဍျွှစ်ခု အနက် positive outcome က ပို သာနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘလိုပဲဆိုဆို အနေထားတွေ ပိုကောင်းလာမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်
ဒီနေရာမှာ ကိုယ်ကျိုး တို့ အတ္တ တို့ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ ခေတ္တ ခဏ ဘေးဖယ် ထားကြရအောင်နော်
လက်တွေ့မှာ ရှိနေတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ စိုးရိမ်မှုကို မျက်ကွယ်ပြုနေမယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ အားကို ဘယ်လို စည်းရုံး လို့ရ ပါ့မလဲ
ဒါဟာလဲ အရေးကြီးဆုံး အချက်ဆိုတာ မမေ့စေချင်ပါဘူး။
နောက်ပီး အခုလို အခြေအတင်ပြောကြတာဟာ သဘောထားသေးသိမ်သူတွေ အတွက်တော့ ကွဲလွဲတယ်ထင်ရပေမယ့် ကျမတို့ကတော့ နှစ်သက်ပါတယ်
လက်ခုတ်တီးကြလဲ ဘာအရေးလဲ ရှင့်
ဒါမှ အမှန်တွေ ထွက်လာမှာ
အရွယ်ရောက်ပီးရင့်ကျက်တဲ့သူတွေပဲ i hope you won't put it into the heart.
ကိုယ့် အမြင်ကို ပွင့်လင်းစွာ ဆက်လက် ဆွေးနွေးကြပါရှင့်
ဒါမှ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးရဲ့ အနှစ်သာရတွေပါ
ကိုယ်နဲ့ မတူ ရန်သူဆိုတဲ့ စိတ်ျွှစ်ဦး စလုံးမှာ မရှိဘူးဆိုတာ ကျမတို့ ယုံကြည်ပြီးသားပါ
ကျနော့စိတ်ထဲမှာပြောချင်နေတာလေးတခုလဲဖြည့်စွက်ပြောသွားပါရစေ။ ကျနော်တို့ရွှေတွေသုံးနေကျစကားတခွန်းရှိတယ်။ "နှမ်းစေ့လေးတွေ အများကြီးပေါင်းရင်ဆီထွက်နိုင်တယ်"ဆိုတာလေ။ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်လဲတိုင်းပြည်အတွက်နှမ်းတစေ့လောက်တော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုး။အဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုကျနော့ခေါင်းထဲအတွေးတခုရောက်တယ်ဗျာ။ကျနော်တို့ဒီစကားတွေကိုတကယ်သေသေချာယုံကြည်ပြီးပြောခဲ့ကြတာမှဟုတ်ရဲ့လား။
စာသင်ကျောင်းဆောက်မယ်။မိဘမဲ့လှူမယ်၊ဆေးလှူမယ်...ဒီလိုနှမ်းစေ့လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကလဲလူတိုင်းနီးပါးလုပ်ချင်စိတ်ရှိရင်တတ်နိုင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်လားဗျာ။တဘက်မှာလဲစနစ်တခုပြောင်းလဲဖို့အတွက် ယုံကြည်ချက်တခုနဲ့ risk ယူပြီးလုပ်နေကြတဲ့နှမ်းစေ့တွေလဲရှိတယ်။ risk ဆိုတာပါလာပြီဆိုတော့...ရှင်းပါတယ်ဗျာ..ပေးဆပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သူတွေလောက်သာလုပ်နိုင်ကြမှာပေါ့၊ ကျနော့အမြင် မြန်မာပြည်ပြောင်းလဲဖို့အရေးမှာ အဲဒီစောစောက အနည်းစုနှမ်းစေ့တွေဟာတကယ်အရေးပါပါတယ်။အဲဒီတော့ risk factor နဲတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အများစုနှမ်းစေ့တွေက...ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမာနဲ့ အများမလုပ်နိုင်တဲ့ risk ယူရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့နှမ်းစေ့တွေကို အရေးနိမ့်နေချိန်မှာ ထိုးနှက်နေမယ့်အစား (စေတနာအရဘဲဖြစ်ဖြစ်)..အထူးသဖြင့် တနိုင်ငံထဲမှာအတူရောက်နေကြသူများက စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ပိုပြီးအကူအညီပေးသင့်ပါတယ်ဗျာ။အနည်းဆုံးတော့ moral supportပေါ့ဗျာ။
တကယ်တော့ဗျာ...အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့်တိုက်ပွဲ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာပစ္စုပ္ပန်အခြေအနေမှာအကဲဖြတ်ဖို့ခက်ပါတယ်။မဆလပြုတ်မကျခင်အစောပိုင်းတိုက်ပွဲတွေတုန်းက တိုက်ခဲ့ကြသူတွေဟာတပါတီစနစ်ပြုတ်ကျသွားစေနိုင်တဲ့အဆုံးအဖြတ်ကျတဲ့တိုက်ပွဲလို့မသိခဲ့ကြပါဘူး...ပြုတ်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ယုံကြည်မှူနဲ့တိုက်ခဲ့ကြတာဗျ။ ဒါပေမယ့်သေချာတာကတော့..လူထုရဲ့အကြောက်တရားထုထည်ကြီးမားလာတော့..စက်တင်ဘာသံဃာအရေးအခင်းမှာ..အဆုံးအဖြတ်ကျမယ့်တိုက်ပွဲဟုတ်မဟုတ်..အများစုကဘေးကရပ်၊အခြေအနေကြည့်၊စမ်းစစ်နေခဲ့ကြလို့ ကျနော်တို့ဘဲပြန်ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ရတယ်။ အကျိုးဆက်က ဒီအစိုးရဆက်လက်တည်မြဲသွားတဲ့အတွက် လမ်းမပေါ်သွေးမြေအကျနည်းခဲ့ပေမယ့် နာဂစ်မှာ အစိုးရလက်ချက်ကြောင့် ပြည်သူတွေသိန်းနဲ့ချီအသက်ပေးခဲ့ရတာတွေ ကျနော်တို့သေချာပြန်တွေးမိကြဖို့လိုပြီဗျာ။
- Harper Lee (1926 - ), To KillaMockingbird, 1960
ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ နိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ Bystander တွေ ရှိနေကြတာဟာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အနိုင်အရှုံးသေချာအောင် မလုပ်ပြနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဒီလို ဒီလို အဆင့်ဆင့်လုပ်မယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ရင် ဘာဆက်လုပ်မယ်။ အဲဒီလို မဖြစ်ရင် ဟိုလို ဆက်လုပ်မယ် ... ဆိုတဲ့ တကယ့်ကို ပြည့်စုံတဲ့ လမ်းစဉ်ကြီး ရှိခဲ့ရင် ဘေးထွက်ကြည့်နေတဲ့ လူအများအပြား ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်နေကြတယ်ဆိုကတည်းက မစွန့်ရဲလို့၊ မစွန့်ရဲဘူးဆိုတာက ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်က စွန့်ပါပြီတဲ့။ စွန့်လိုက်တာအတွက် အကျိုးရလဒ်ရှိ/မရှိ သေချာ မသိလို့ပါပဲ။ ကိုယ်က စွန့်လိုက်ပါပြီ။ ကိုယ်သေပြီး (ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကျိုးကို စွန့်ခဲ့ပြီး) နောက် ၅ နှစ်မှာ အကျိုးကျေးဇူးရမလား။ ၁၀ နှစ်လား။ သေချာ မသိရလို့ကတော့ ဘယ်သူမှ လာရောက် စွန့်စားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်က စွန့်ခဲ့ပြီ။ နောက်မှာ ကိုယ့်လိုစွန့်ဖို့ လူရှိ/မရှိကလဲ မသေချာ၊ နောက်တခါ ကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေကလဲ လမ်းကို ဖြောင့်ဖြောင့်လျှောက်မလျှောက် မသေချာ၊ မယုံကြည်ရရင်တော့ ဘယ်သူမှ ပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ယုံကြည်မှုရဖို့ကလဲ ယုံကြပါ အော်နေလို့ မရ၊ ယုံအောင်လို့ လမ်းစဉ်ချပြမှ ဖြစ်မှာပါ။
ကိုလောရှည်…. ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို လိုချင်လို့ရှိရင် ဘယ်သူ့ဆီကမှ လက်ဖြန့်တောင်းနေစရာမလိုပါဘူး။ မိမိကိုယ်တိုင် စတင်ကျင့်သုံးပြလိုက်တာဟာ အကောင်းဆုံး လမ်းကြောင်းကို ချပြလိုက်တာပါဘဲ။ လူအများစု ကျင့်သုံးလာတဲ့တနေ့ဟာ ဒီမိုကရေစီ ရတဲ့နေ့ပေါ့။ ဒါအရှင်းဆုံးနဲ့ အတိုဆုံးပြောတာပါဘဲ။ ကျနော်တို့ အဲဒီအချက်ကို လက်ခံယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့လူ အနည်းစုဘဲရှိသေးတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျနော်တို့ဘက်က အရေးနိမ့်နေသေးတာပါ။
တခါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်အပြင်ဘက်ကို ခရီးသွားတော့ အစိုးရက လမ်းမှာ ဖြတ်တားတဲ့အတွက် ဒေါ်စု ကားထဲမှာ ရက်ပေါင်းများစွာ နေခဲ့ရတာကို မှတ်မိတယ်မို့လား။ ဒေါ်စုနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရင် အချိန်မရွေး ပြန်လှည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်စု ပြန်မလှည့်ဘူး။ နေပူကျဲကျဲအောက်မှာ ဆီးချုပ်ဝမ်းချုပ်ခံပြီးနေတယ်။
အဲသည်လိုနေလိုက်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုလောရှည်ပြောသလို ၅ နှစ် ၁၀ နှစ်အတွင်း မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ ရသွားသလား၊ အစိုးရပြုတ်ကျသွားသလားဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီလည်း အခုထိမရသေး၊ အစိုးရလည်း ပြုတ်ကျမသွားသေးပါဘူး။ ဒါဖြင့် ဒေါ်စု ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သက်သက် ဒုက္ခခံပြီး လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ နည်းနည်းလောက် စဉ်းစားကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ၈၈၈၈ ကစလို့ ဒေါ်စု နိုင်ငံရေးထဲ ၀င်ရောက်လာတော့မှသာ ကျနော်တို့ မြန်မာလူထုဟာ လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီအကြောင်းတွေကို နားရည်ဝလာတာ။ ဒေါ်စုဟာ အခွင့်အခါပေးတိုင်း ကြုံတိုင်းမှာ လူထုကို စံနမူနာပြ တိုက်ပွဲဝင်ပြတယ်။ အဲသည်တိုက်ပွဲတွေဟာ ပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲတွေတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တချိန်မှာ တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်လာရင် ကိုယ့်ဘက်က လူထုကို အဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင် ပြင်ဆင်ပေးတဲ့တိုက်ပွဲတွေဆိုတာ နားလည်ရမယ်။
အလားတူဘဲ။ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေကလည်း လူ့အခွင့်အရေး ပေးဟေ့ပေး လို့သာ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ လိပ်ခေါင်းထွက်မတတ် အော်နေကြတာ။ တကယ်တမ်း ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ပိတ်ပင်လာတော့ အမြီးတောင်မလှုပ်ရဲဘဲ ချောင်ထဲမှာချည်း ကုပ်နေကြရင် လူထု စိတ်ထဲကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအပေါ် ယုံကြည်လာအောင်၊ စွဲထင်လာအောင် လုပ်နိုင်မလဲ။
အထက်က “ရဲ” ပြောခဲ့သလို ပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲကို လူတိုင်းကသာ ထိုင်စောင့်နေခဲ့ရင် ကျနော်တို့ တော်လှန်ရေးမျိုးဆက်ဘဲ ပွဲသိမ်းသွားမယ်။ အာဏာရှင်စနစ်ကတော့ ပန်းပန်လျက် ကျန်ရစ်မယ်။ တချို့လူတွေ ပြောတာရှိပါတယ်။ “နိုင်မယ်ဆိုတာ သေချာပြီဆိုရင် ငါလည်း ၀င်ပါဘို့ ၀န်မလေးပါဘူး”….တဲ့။ ဘယ့်နှယ်စကားပါလဲ။ နိုင်မယ်သေချာနေပြီဆိုမှတော့ သူမပါလည်း သိပ်တော့ ကိစ္စမရှိလှတော့ပါဘူး။ အဓိကက အခုလို အင်အားတောင့်ဘို့ လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ လတ်တလောရလဒ်ကို မမျှော်ကိုးဘဲ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာမို့ ကိုယ့်တာဝန်တရပ်အနေနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး၊ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ထိပါးလို့ ကိုယ်ကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုးဘဲ မွေးသင့်ပါတယ်။
အဲသည်လို မဟုတ်ဘဲ နိုင်မယ်ထင်လို့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ တလွှားလွှား ရှေ့ထွက်လာတဲ့သူတွေ ဟော…မနိုင်ပုံလည်းပေါက်ရော အလျှိုလျှိုပျောက်သွားလိုက်ကြတာ။
သူတပါးက ကိုယ့်ကို ယုံစေဘို့အတွက်ဆိုရင် ကိုယ်က ယုံကြည်လောက်အောင် ရှေ့ကလုပ်ပြရမယ်။ လူတွေကို သတ္တိရှိစေချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း ရှေ့က သတ္တိရှိပြကြရမှာပေါ့။ ဟေ့…မင်းတို့ မကြောက်ကြနဲ့ကွလို့ ဘလော့ဂ်ပေါ်က အမည်ဝှက်နဲ့ ကုန်းအော်နေပြီး ကိုယ်ကတော့ အိမ်ထဲမှာ ခေါင်းမြီးခြုံပြီး ပုန်းနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ကိုယ့်ကို ယုံမလဲ။ လူအခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ကြကွ ဆိုပြီး ကိုယ်က လောလောဆယ် ကိုယ့်အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကိစ္စမှာ မသိလိုက်မသိဘာသာ နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ကိုယ့်ကို ယုံကြည်ပါ့မလဲ။
ကျနော်ပြောပြမယ်။ ဘလော့ဂ်ပေါ်ကနေ ရုရှားကစစ်ဗိုလ်တွေနဲ့ လေသေနတ်ပစ်နေရတာ ဘာမှ အပန်းမကြီးပါဘူး။ မြန်မာစာရိုက်တတ်သူတိုင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲသည် လေသေနတ်တိုက်ပွဲတွေကရော ဒီစစ်ဗိုလ်တွေရဲ့ ခံယူချက်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သလား။ ဖတ်ရှုနေတဲ့ မြန်မာပရိသတ်ကိုရော လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအပေါ်မှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်သက်ဝင်လာအောင် တတ်နိုင်ပါသလား။
ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ထိပါးလာရင် ကိုယ်မခံဘူးဆိုတာကို ကိုယ်က စံနမူနာပြ ရှေ့ကနေ တိုက်ပြရဲသလား။ တိုက်ပြလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကို အနှိပ်ကွပ်ခံရမှာကတော့ အသေအချာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နောက်မှာ ကိုယ့်တိုက်ပွဲကို ထောက်ခံယုံကြည်တဲ့ လူတွေ နောက်ထပ် ထပ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဒေါ်စုတို့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ဆီကနေတဆင့် သွေးကူးယူခဲ့တာဘဲ။
ကြောက်သွားမယ့်လူ၊ နောက်ဆုတ်သွားမယ့်လူတွေလည်း အပုံအပင် ရှိမှာဘဲ။ ဒီလူတွေကတော့ ကိုယ်ရှေ့က တိုက်မပြလဲ၊ သူ့ဟာသူ အလကားနေရင်းလဲ ကြောက်နေကြမှာဘဲ။ ကိုယ်လုပ်ပြမှမဟုတ်။
ရှေ့မှာ ဆဲဗင်းဂျူလိုင်တို့ ရှစ်လေးလုံးတို့မှာ စွန့်လွှတ်သွားခဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ အဲသည်လူတွေရဲ့ စွန့်လွှတ်မှု အချည်းနှီးမဖြစ်ဘူး။ ကိုထင်ကျော်လိုလူမျိုး တယောက်အဖမ်းခံရတိုင်းမှာ နောက်ထပ် အလားအလာရှိတဲ့ လူငယ်ပေါင်း များစွာကိုိ မွေးဖွားပေးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တခါ အချုပ်အနှောင်ခံရတိုင်းမှာ လူပေါင်းမျာားစွာရဲ့ စိတ်ဓါတ်အနှောင်အဖွဲ့ကို ဖြေပေးတယ်။
အဲသည်လို ရှုထောင့်က ရှုမြင်တတ်တဲ့လူတွေ၊ လက်ခံကျင့်သုံးသူတွေ အများစု ဖြစ်လာတဲ့တနေ့ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီအရေး မုချအောင်မြင်မှာဘဲ။
ကိုယ့်အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေတာကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးနဲ့ အိမ်ထဲမှာ ကုပ်ရင်း “လောလောဆယ် ငါ့အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေနေပါတယ်၊ ငါနဲ့အနေသားကြီးပါ” လို့တွေးရင်း အင်တာနက်ပေါ်မှာဘဲ လေသေနတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေသူတွေများနေသေးရင် မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရဘို့ ဝေးနေဦးမှာပါဘဲ။ ဒါက ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် လက်ခံရမယ့် အရှိတရားပါ။
လောကကြီးမှာ ကိုယ် ဘာကိုပဲ လိုချင်လိုချင် ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ စွန့်လွှတ်ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။
စာမေးပွဲအောင်ဖို့ စာကျက်ရမယ်။ အဲ့ဒီအတွက် မိမိရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို အသုံးချသလို ထိုက်သင့်တဲ့ ငွေကြေးလို သုံးစွဲရတယ်။ ဘာမှ လုပ်ဆောင်မှု မရှိပဲ အောင်မှ ၀င်ဖြေမယ်လို့ ပြောနေတာဟာ လက်တွေ့ မကျပါဘူး။
ဒါ လူတစ်ယောက်တည်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စလေးကို ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောပြတာ။
အခုကိစ္စက တစ်နိုင်ငံလုံး၊ တစ်မျိုးသားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ အရာရဲ့ တန်ဖိုးက အင်မတန် ကြီးမားပါတယ်။ ဒါကြောင့် တော်ရုံပေးဆပ်မှု၊ စွန့်လွှတ်မှု၊ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ မရနိုင်သလို လူနည်းစုနဲ့ လုပ်ဆောင်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အမျိုးသားရေး တာဝန်တစ်ရပ်အနေနဲ့ လူတိုင်း အခန်းကဏ္ဍ အသီးသီးက ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှသာ ရရှိမှာပါ။
အဲ့ဒီလို လူတိုင်း မိမိနဲ့ မသက်ဆိုင်သလို မနေပဲ မိမိရဲ့ အတ္တ၊ အကြောက်တရားတွေကို ဖယ်ရှားပြီး ပါဝင်လာစေဖို့ ရှေ့ကနေ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံပြီး လုပ်နေကြတာပါ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ စနစ်တစ်ခု၊ အထူးသဖြင့် မိမိ လူမျိုး စစ်အာဏာရှင်တွေကို ဖြုတ်ချရာမှာ တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ သေချာပေါက်နိုင်အောင် အစီအစဉ် ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်ဟာ အင်မတန် ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါးတဲ့ တွေးခေါ်မှု တစ်ခုလို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်စွန့်လွှတ်ကြိုးစားတိုင်း အကောင်အထည် ထင်ထင်ရှားရှား ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ အခြားသော စီးပွားရေး၊ ပညာရေးတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတောင် နှစ်အကြာကြီး မြှပ်နှံပြီးမှ အောင်မြင်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာတော့ လူနည်းစုနဲ့ လုပ်နေသမျှကာလပတ်လုံး ဘယ်လောက်ပဲ အစီအစဉ်တွေ ရေးဆွဲ ရေးဆွဲ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အခုလို မစွန့်ပဲ စားချင်သူတွေ၊ အကြောက်တရား ကြီးမားနေသူတွေ များပြားနေသမျှ ကာလပတ်လုံးပါပဲ။
ဒီတော့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်၊ မိမိ အသက်အန္တရာယ်ကိုတောင် မကြောက်ပဲ လုပ်နေတဲ့ သူတွေ ပြုန်းတီးသွားမှာကို အမှန်တကယ် မလိုလားဘူးဆိုရင် မိမိ အပါအ၀င် မိမိနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသော လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကို သူများနည်းတူ မစွန့်နိုင်ရင်တောင် ဘေးကနေ ရပ်ကြည့်မနေပဲ တတ်အားသရွေ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာအောင် စည်းရုံးပြီး ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန် မှန်ကန်သော နိုင်ငံ့သားကောင်းများ ဖြစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။
ဟီး.. အခု တွေ့ ရသမျှမှာတော့ လောလောဆယ် အင်တာနက်ပေါ်မှာ လေသေနတ်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲနေသူ ကတော့ ကိုပေါ ပါဘဲ ဗျာ...
နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် လေတွေ လေတွေ ပေါပါဘိ... ဟီဟိ။
Please stop fighting! We all are same until we do not dare to go back burma and fight spdc. unity is strength. Just do what u believed. this is the right of everyone.
Yeah, only Ko Paw and the Practical Man are talking now. Others? Don't even dare to talk - cowards! heehee...haha...helhel...hoehoe... :D
Hey bsf, don't generalize too much lah. I don't think you are the same with the Burmese activists in Singapore like Ko Paw and others. Come on, don't pretend lah.
လည်း၊မရွဲ.မစောင်းကိုယ်.လမ်းကြောင်းကို၊စိတ်ှကောင်းဖြင်.ပင်၊ရှေှးရှုနှင်လော.။ တဲ.ဗျာ။
အလေးမပြိုင်ပွဲလိုပေါ.ဗျာ။ ကီလို ၁၀၀ နိုင်တဲ.
သူက ၁၀၀ မ မှာပေါ.။ ကီလို ၆၀ ပဲ နိုင်တဲ.သူက
၆၀ ပဲ မ နိုင်မှာပေါ.ဗျာ။ဒီသဘောပါပဲ။
You all have the right to do what you believe. Really, you can do one. Like the right to talk Singlish as I do and many others, e.g., the right to pretend in the name of freedom, the right to beacoward in the name of wisdom, and so on lah. Understand or not? Anyway huh, can do what you believe already. No need feel bad because others do what you dare not do. I also do nothing because I have the right and I am very smart. So, don't talk cock lah. You know, I know we are what we are lah. Ah la mak!
Burmese Ah Beng
1) အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ ရဲရဲရင့်ရင့် တိုက်ပွဲ
၀င်နေကြတဲ့ စင်ကာပူက သူရဲကောင်းတွေကို ဦးညွှတ်လိုက်ပါတယ်။
2) ကျနော်ကိုယ်တိုင်က 88 ဇွန်လ အရေးတော်ပုံနဲ့ သြဂုတ်လ 8လေးလုံးတွေမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါခဲ့သူ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဟောင်း တဦးပါ။
3) ကိုပေါရဲ့ ခံစားချက်တွေကို နားလည်ပါတယ်။ ကိုပေါ လုပ်နေတာတွေကိုလဲ ထောက်ခံပါတယ်။
4) 88ကို ဖြတ်သန်းဖူးသူတိုင်းဟာ တပ်ဦးကျွံသွားမယ် ဆိုတဲ့စကားကို ကြားဖူးနားဝရှိကြပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီစကားကို ခပ်မိန့်မိန့်ကြီး ပြောတတ်ကြသူတွေဟာ ဘာဆိုဘာမှ လုပ်ရဲကိုင်ရဲ ရှိကြသူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ၀မ်းနည်းစွာ တွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ လုပ်နေ၊ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူတွေကိုလဲ စည်းရုံးနေ၊ မိမိနဲ့ အယူအဆ မတူသူများကိုလဲ ဆွေးနွေးနေနိုင်တဲ့ ကိုပေါကို လေးစားမိပါတယ်။
5) မတူညီတဲ့အမြင်တွေဟာ နေရာတကာမှာ ရှိကြပါတယ်။ ဘာမှလက်တွေ့ မပါတဲ့ အတွေးသက်သက် နဲ့တော့ ကျုပ်တို့ ရောက်ချင်တဲ့ နေရာကို တသက် မရောက်နိုင်ပါဘူးလို့ ပြောခဲ့ချင် ပါတယ်။
6) ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ပါဦး ကိုပေါ။
အလွန်အမင်း လေးစားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိန့်ခွန်းများထဲမှ ကိုပေါဘလော့ခ်မှာ တွေ့လိုက်ရတဲ့ ဒီကောက်နှုတ်ချက် မိန့်ခွန်းလေးကို သိပ်သဘောကျတဲ့အတွက် ဒါလေးကိုပဲ ပြန်လည် highlight လုပ်လိုက်ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို.လုပ်တာက နအဖ ကိုထိခိုက်လားဘာလား
ငါးရောင်းစား နေရတဲ.လူတွေကိုတော. တိုက်ရိုက်ထိ
ခိုက်တယ်ခင်ဗျ။ အရင်လို ဇိမ်လေးနဲ. ငါးရောင်းလို.မ၇
တော.ဘူးဗျို.။ ယ ပြောင်းပီး ဂွင် အသစ်လေးဘာလေး
ရှာနေရပီခင်ဗျ။ သာဓု သာဓု သာဓု ပါခင်ဗျာ။။။
လူချင်းလည်း မတွေ့ ဖူးပါ.. နေရာဒေသချင်းလည်း မတူပါ..
သို့ သော် ကျွန်တော့်ကို နိုင်ငံရေး ခံယူချက်များ အများကြီး ပြောင်းလဲစေသူ...